आज कुशे औँसी अर्थात बुवाको मुख हेर्ने दिन : आफ्नै छोरीको ह,त्या गर्ने बाबु पक्राउ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आज कुशे औँसी अर्थात बुवाको मुख हेर्ने दिन : आफ्नै छोरीको ह,त्या गर्ने बाबु पक्राउ
काठमाडौं । आज कुशे औँसी अर्थात बुवाको मुख हेर्ने दिन । हरेक सन्तानले आफ्ना पितालाई याद गरिरहेका छन् । कतिपयले उपहार लिएर गए भने कतिले फोन गरेर आर्शिवाद लिएका छन् । तर रुपन्देहीमा एकजना यस्ता बाबु फेला परेका छन्, जुन कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । प्रहरीले आफ्नै छोरीको ह,त्या गर्ने एकजनालाई १९ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ ।
विष्णुपुरा ९ हाल गैडहवा गाँउपालिका वडा नं. ६ गुलरीया बस्ने ६३ वर्षीय पुर्णवासी लोनीयालाई १९ वर्षपछि सिद्धार्थ नगर पालिका वडा नं. ५ मालपोत कार्यालय अगाडीबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । २०५४ साउन २३ गते लोनीयाले छोरी हराएको भनी निजले आफनो १५ वर्षीया छोरी कान्ती लोनीयालाई आफनो घरमा ह,त्या गरेका थिए ।
घरदेखि अन्दाजी १ किलोमिटर टाढाको दुरीमा रहेको घाटमा आफैले बोकेर खाल्टो खनेर पुरेको पनि प्रहरीले बताएको छ । २०५४ भदौ १३ गते गाँउका महिलाहरु घाँस काट्न जाने क्रममा खेतमा मानिसको कपालको रौहरु, चुराहरू, कपडाका टुक्रा तथा हड्डीहरुको साथै खेतको मेडीमा खनेको माटो र माटोमा दुईवटा प्वालबाट मानिसको टाउको देखिएपछि घटनाको बारेमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।
उखुबारीमा रहेका कपडाको टुक्राहरु पुर्णवासी लोनीयाको छोरी अन्दाजी वर्ष १५ कान्ती लोनियाले लगाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको थियो । पुर्णवासी लोनियालाई गाउँका मानिसले सोधपुछ गर्न बोलाउँदा भागेका थिए । घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले लाशको टाउको छुट्टीएको आखाँ नभएको कंकाल फेला पारेका थिए ।
गाउँलेहरुले कान्ती लोनियाकै लाश भनी सनाखत गरेको र निजको बुबा पुर्णवासी लोनीयाले पटक पटक छोरीलाई हातपात गर्ने गरेको हुँदा बाबुले नै ह,त्या गरेको गाउँलेको आशंका थियो । कर्तव्य ज्यान मुद्धामा अनुसन्धान सम्पन्न भई मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा पेश गरी थप कारबाही अगाडी बढाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही मार्फत जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्धा दायर भईसकेको अवस्थामा खोजतलास गर्दा उनी फेला परेका हुन् ।